Nisy nahita tampoka anefa izy ka avotra soa aman-tsara ihany ilay zaza, raha ny vaovao niparitaka tao anaty tambajotran-tserasera. Nentin’ny olona tao amin’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena ao Talatamaty kosa ilay Ramatoa nanaovana fanadihadiana. Tsy nanaiky rahateo ny ray aman-drenin’ilay zaza. Raha araka ny fampitam-baovaon’ny kaomandan’ny borigady ao an-toerana na ny CB taminay omaly moa dia niaiky ny fidirany tao amin’io sekoly iray io ity vehivavy ity. Efa nisy ny andraikitra noraisin’izy ireo sy ny sekoly ary ny ray aman-drenin’ny mpianatra hisorohana ny tranga tahaka izao. Hisy ihany koa ny fanadihadiana lalina hataon’ny mpitandro ny filaminana mikasika ity resaka zaza tsy hita eto amintsika ity .